Chelsea, Bayern Iyo Villarreal Oo Min AFAR Gool Dhaliyey Iyo Dhacdooyinkii Laga Ururiyey Kulamadii Champions League - Laacib
HomeWararka Champions LeagueChelsea, Bayern Iyo Villarreal Oo Min AFAR Gool Dhaliyey Iyo Dhacdooyinkii Laga Ururiyey Kulamadii Champions League
Chelsea ayaa guul weyn oo 4-0 ah ka gaadhay kooxda reer Sweden ee Malmo oo ay ku garaacday Stamford Bridge kulan ay laba ciyaartoy kaga dhaawacmeen Blues oo ay kusoo galeen kaalinta labaad ee Group-ka H.
Blues oo guul-darro kasoo gaadhay ciyaartii Juventus ayaa caddaysay inay tahay koox difaacan karaysa koobka Champions League ee ay xilli ciyaareedkii hore ku guuleysatay, isla markaana aanay hadafkeeda ka joojin karaynin dhaawacyadu.
Afar gool oo ay u kala dhaliyeen Christensen, Jorginho oo laba rikoodhe saxeexay iyo Kai Havertz ayaa Chelsea siiyey saddex dhibcood oo ay ku noqotay kooxda kaalinta labaad kaga jirta Group H, iyagoo yeeshay lix dhibcood, waxaana ka horreysa Juventus oo sagaal dhibcood ka urursatay saddexdii kulan ee ay dheeshay, caawana 1-0 kaga soo adkaatay Zenit oo ay ugu tagtay waddanka Ruushka.
Bayern Munich ayaa iyaduna 4-0 kusoo xasuuqday Benfica oo ay marti ugu ahayd waddanka Portugal, waxaanay dhamaan afarta gool dhaliyeen 20kii daqiiqadood ee ugu dambeeyey ciyaarta.
Kulankan ayaa u muuqday inuu ku dhamaanayo barbarro goolal la’aan ah amaba farqi aan badnayn ay Bavaria libinta ku heli doonto sababtoo ah laba gool oo ay dhaliyeen ayay VAR ka diidday kaddib markii ay ciyaartoydu dabbaal-degga dhamaysteen.
Laba gool oo uu dhaliyey Leroy Sane, mid uu ku daray Robert Lewandowski iyo gool kale oo ay iska dhalisay Benfica ayaa Bayern Munich siiyey guul weyn oo 4-0 ah. Arrinta layaabka leh ayaa waxay tahay in Bayern Munich ay goolashadeeda dhalisay 14 daqiiqadood gudahood oo ah intii u dhaxaysay daqiiqadihii 70aad illaa 84aad.
Bayern Munich ayaa sagaal dhibcood ku hoggaaminaysa Group E, waxaana ku xigta Benfica oo afar dhibcood haysata halka Barcelona ay saddex dhibcood leedahay.
Dhinaca kale, Villarreal oo ay isku group yihiin Manchester United ayaa 4-1 ku dardartay Young Boys oo bilowgii tartanka guul-darro lama filaan ahayd u xambaarisay Red Devils.
Natiijooyinka kulamadii Champions Lague ee Groupyada E, F, G & H: